Ahoana no hanaraha-maso ny findainao very - Victor Mochere
Ahoana ny fomba hanaraha-maso ny telefaona very anao
Isika rehetra dia manana fotoana very ny finday, na farafaharatsiny mahafantatra namana na olona ao amin'ny fianakaviana izay manana. Mety ho trangan-javatra mampidi-doza ny fahaverezan'ny telefaona noho ny lanjany sy ny voka-dratsiny hafa manaraka avy hatrany. Fotoana mampahory tokoa izany, satria lasa tena zava-dehibe amin'ny fiainantsika ny finday ary toa fihemorana ny fahaverezana. Rehefa misy olona very na nangalatra ny findainy, dia tandindonin-doza noho ny fanafihan'ny fiainana manokana ny angon'ilay fitaovana.
Ankoatr'izay, ny rakitra media rehetra dia tsy tratra. Ankoatr'izay dia azo ampiasaina amin'ny asan-jiolahy ny finday nefa tsy fantatry ny tompony. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahay manara-maso ny findainy rehefa very na nangalarina, noho izany dia nividy vaovao izy ireo. Ny dingana manan-danja dia ny fametrahana ny finday ho toy ny nangalatra, saingy na izany aza dia dingana lava sy sarotra.
Ahoana ny fomba fiasan'ny finday?
Ahoana no fomba hamitana telefaona very
Ny rafitra fanaraha-maso an-tariby dia manampy amin'ny fahafantarana ny toerana tena misy ny telefaoninao. Raha te hiasa ny mpanara-maso ny telefaona dia tsy maintsy alefa ny telefaona. Ny telefaona dia mamoaka famantarana radio izay azon'ny tilikambo finday akaiky indrindra, izay voatahiry ao amin'ny angon-drakitra orinasa. Ity no fomba mahazatra sy mahazatra indrindra amin'ny fanarahana telefaona finday, na dia GPS (Global Positioning System) miaraka amin'ny fanampian'ny fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo aza dia ampy hanampiana amin'ny fitadiavana telefaona.
Misy fomba maromaro azonao ampiasaina hanarahana ny telefaona very, araka ny lisitra etsy ambany.
1. Laharana IMEI
Ny International Mobile Equipment Identity (IMEI) dia isa tokana izay tonga amin'ny finday rehetra. Tena mora ny manara-maso finday very mampiasa IMEI, na dia niova ny karatra SIM. Isaky ny misy telefaona manandrana mifandray amin'ny tambajotra iray na hiantso na handraisana antso, dia mivoaka ny laharan'ny IMEI, izay azon'ny mpampiasa arahina avy hatrany. Mba hamitana azy dia tsy maintsy alefa ny serivisy toerana misy ny findainao sy ny angona. Tsara ny mitazona hatrany ny toerana misy anao. Raketo foana ny laharan'ny IMEI-nao. Raha te haka ny IMEI dia antsoy ny *#06# amin'ny findainao. Araho ny dingana etsy ambany mba hanaraha-maso ny findainao amin'ny alàlan'ny laharana IMEI.
Mandehana any amin'ny faritra misy anao
Hanaisotra ny toerana misy ny toerana
Alefaso ny angona finday na WiFi
Mandehana amin'ny fitantanana ny fitaovana Google
Azonao atao ny mampiasa ny IMEI
Ny pejy dia mampiseho sarintany ahitana ny toerana misy ny telefaona
Raha tsy misy io fitaovana io dia hiseho ny safidy safidy. Raha toa ka ambany ny fahafahanao maka ny telefaona, dia aleo mamafa, manidy na manafoana ny fitaovana ampiasainao mba hisorohana ny fampahalalana anao tsy hiditra.
2. Vahaolana natsangana
Ny ankamaroan'ny mpanamboatra telefaona amin'izao fotoana izao dia mampiditra fepetra fiarovana amin'ny fampiasana amin'ny fitaovana, mba hanamafisana ny fampahalalam-baovao sy hijerena ny findainao raha mety ho very izany. Ireo endri-javatra ireo dia ny fametrahana ny findainao, ny fanesorana ny data ary mahazo hafatra maimaika rehefa miova ny karatra SIM. Noho ny fiavian'ny revolisiona ara-teknolojia, ankehitriny dia azo atao ny mijery ny findainao rehefa miala.
3. Vahaolana fahatelo
Azonao ampiasaina koa ny fampiharana na programa handehanana telefaona very.
a. Find My Device
Amin'ny tolotra My Google an'ny kaonty Google dia azonao atao ny miditra amin'ny fampahalalana rehetra an-kapobeny, anisan'izany ny findainao. Eo ambany ny kaontiko dia misy ny fitaovana ampiasainao izay manampy ny olona hamerina ny findainy very amin'ny fampiasana ny metric Google. Azonao atao ny manidy azy, manala izany, miantso izany na mahita ny toerana misy azy. Mba hijerena ny toerana misy ny telefaona, dia tokony havadika ary ny angon-drakitra mivezivezy.
Cerberus dia fampiharana ampaham-batana hafa izay manangona sary avy amin'ny olona te-hahazo fahazoan-dalana tsy nahazo alalana amin'ny findainao. Ny app dia hampakatra ny antsipirihan'ny fiarovana amin'ny mailaka amin'ny sehatra tsy tapaka, hanampy amin'ny fanarahana ny findainao. Ny fampiharana dia tonga miaraka amina noforonina noforonina mba hanapahana hetsika efa voalaza etsy aloha, izay ahitana ny famerana, ny fanesorana sy ny fanombohana singa mandoingitra.
Ny fahaverezan'ny findainao na nangalatra dia loza mahatsiravina ho an'ny tsirairay. Ny fahasimbana dia misy ny fatiantoka ara-bola sy ny tsy fahafahana miditra amin'ny angon-drakitra sarobidy nipetraka tao. Raha misy telefaona misy halatra, ny dingana voalohany tokony horaisina dia ny mitatitra ny fitaovana halatra any amin'ny polisy. Azon'ny polisy atao ny manara-maso ny laharana IMEI na farafaharatsiny ao anaty lisitra mainty mba hamerana ny fidirana amin'ny tambajotra. Ny fifandraisana amin'ny mpamatsy finday dia mety ho fanapahan-kevitra tsara ihany koa satria afaka mijery izany amin'ny alàlan'ny laharana IMEI nomena izy ireo. Raha tsy mamaha ny olana ireo dingana etsy ambony, dia ny safidy tsara indrindra dia ny fampiasana ny fanampian'ny serivisy fanaraha-maso IMEI.
Ahoana ny fomba hanovana ny anaranao any Kenya?
M-Pesa dia miampanga ny fandefasana vola any ivelany any 2022